၂၀၀၉ ခုနှစ် အော့ဇီကဗျာ (၅ )ပုဒ် – zlkontempo
Posted on October 30, 2012 | by zlkontempo
[၂၀၀၉ ၊ ဧပြီ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံရန်လာကြသူ အာဖဂန်လူမျိုး ၄၇ ဦးသယ်ဆောင်လာသော သင်္ဘောတစ်စီးသည် အက်ရှမီးယားသန္တာကျောက်တန်းအနီး၌ ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စီးနင်းသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက် မကြာမီတွင် ပေါက်ကွဲနစ်မြုပ်သွားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည် ၅ ဦးသေဆုံးပြီး ကျန်ရစ်သူအများစုမှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာများ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရရှိခဲ့ကြသည်။]
နိုင်ငံ – အမှတ်တရတစ်ခုအဖြစ်ပဲရှိပါတော့တယ်
ပင်လယ် – မိမိတို့အားကယ်တင်စောင်မရာ (သို့) သေတွင်း
အပွင့်စနစ် – မခံမရပ်နိုင်တဲ့ အပူဒဏ် ၊ အဆက်မပြတ်ရေငတ်ခြင်း
ရေတပ် – မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမြူထုထဲ တောက်ပနေတဲ့ စစ်သင်္ဘော ၂ စင်း
သင်္ဘောလမ်းပြ – မျှော်လင့်ချက်ဟာ ကီလိုမီတာ ၂,၀၀၀ လမ်းချော်သွားခဲ့တယ်
မီးလောင်ခြင်း – မီးခြစ်ဆံခြစ်လိုက်သူအဖို့
သေခြင်းတရားဟာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရခြင်းကို ဖီဆန်တယ်
အရေပြား – မိမိတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးအကာအကွယ်ဟာ မီးစွဲလောင်ကျွမ်းသွားတော့တယ်
အိုင်ဒင်တတီ – ဖခင် ၊ အငှားကားယာဉ်မောင်း ၊ ဒုက္ခသည် သင်္ဘောပေါ်ပါလာသူ
မုသားများ – မျှဝေပိုင်ဆိုင်နေထိုင်ရဖို့
အကန့်သပ်မဲ့ လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးများ (ဩစတြေးလျ)
အနှစ်သာရ – သွေးနဲ့ သွေးပြန်ကြောတို့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ကြသလို
ဝေဒနာနဲ့ သက်ရှိရှင်သန်နေထိုင်မှုတို့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ကြသည်
အရေပြားအစားထိုး – ဟောဒီပိုးသတ်ထားတဲ့ ၊ ကောင်းကင်ဘုံ မ၀င်ရောက်မီ ၀ိဥာဉ်များ
ကုသခြင်း သန့်စင်ရာ ဌာနမှာ သူတို့ မိမိကို တစ်စစီပြန်ကပ်တယ်။
ဂရုစိုက်ခြင်း – မိမိအိပ်ရာ ဘေးမှာ အစောင့်အကြပ်တစ်ယောက်ဟာ
မိမိကို သတိနဲ့ ကြည့်နေတယ်
သေရွာပြန် လားဇရပ်စ်လို ပြန်ထလာပြီး
ဒီတိုင်းပြည်မှာပဲ အပြီးအပိုင် အခြေချနေထိုင်သွားမလား
သူ့မှာ စိုးရိမ်စိတ်ကြီး မဖုံးသာ မဖိသာနဲ့ ။ ။
(Susan Austin ရဲ့ Those Who Came Across the Sea)
စစ္စလီက တံငါသည် ယောက်ျားတွေဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီက အတိုင်းပဲ။
သူ့ ညိုမောင်းမောင်း လက်ဖ၀ါးနဲ့ အုပ်လိုက်တယ်
ငါးရဲ့ အထိတ်တလန့် ဖြစ်နေမှုကို
အေးဆေးသက်သာသွားစေဖို့ ။ ။
(Shevaun Cooley ရဲ့ Expeditions with W.G. Sebald ကဗျာမှ အပိုင်း ၂)
ပန်းချီအနုပညာနှင့် သေခြင်းတရား မှတ်စုများ
ပုံရေးဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့် ပြသထားတယ်။
ပထမ အဆင့် ––
လိမ္မော်နီ ၊ လိမ္မော်ခရမ်း ၊ ခရမ်းနီ . . .
ဒုတိယ အဆင့် ––
အတန်းလိုက်စီထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ––
အနီရောင် ၊ လိမ္မော်ရောင် ၊ ခရမ်းရောင် ရဲရဲတောက်
အချောသပ် ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ ပစ္စည်း
သူ့ကို ပတ်ထားတဲ့ စက္ကူဖြူထက်တောင်
သင်္ကေတတစ်ခုလို ၊ မျိုးရိုးရဲ့
(Susan Fealy ရဲ့ Notes on Art and Dying –– မူလစကားပြေ ကဗျာပုံစံကို ကဗျာပုံစံအဖြစ်ပြန်စီခြင်း)
[သေဒဏ်ပေးနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆေးထိုးသတ်ခြင်းမှာ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိတယ်။ ဆေးတွေရဲ့ ကြားထဲ ဆားငံရည် ထည့်သွင်းတယ်။ လမ်းကြောင်းရှင်းစေဖို့ ]
I. ဆိုဒီယမ်သိုင်အို ပဲန်သလ် (၅ ဂရမ်)
ပျဉ်ပြားပေါ်တုပ်နှောင် ၊ ပြွန်တစ်ချောင်း
နောက်ဆုံးနံရံ။ မီးပူတိုက်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီ
နဲ့ အင်္ကျီ ၊ ရှန်ပူနဲ့ လျှော်ထားတဲ့ ဦးခေါင်း
ဒီရေဘီးတစ်လုံးလို အဖန်တလဲလဲ သွေးခုန်နှုန်း
ဒီရေ ပစ်တင်လိုက်တဲ့ အမှိုက်တွေကို ဆေးကြောပြီး
II. ပဲန်ကူရိုနီယမ် ဘရိုမိုက်ဒ် (၁၀၀ မီလီဂရမ်)
ကြမ္မာကို သိလိုက်ရသူတွေပဲ သိနိုင်ကြတယ်
မိနစ်ပိုင်းပဲ ကျန်တော့တယ်ဆိုတာ။ ပင်လယ်ပြင်မှာ
မျှောလိုက်တဲ့ ပျဉ်တစ်ချပ်ပေါ်ကြိုးနဲ့ တုပ်လို့
III. ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုဒ် ( ၁၀၀ မီလီဂရမ်)
သင့်ခြေမျက်စိကို လာတွတ်နေကြတဲ့ ငါးတွေ
သင့်လက်ထဲကနေ လျှောဆင်းသွားတဲ့ ရေဘ၀ဲ
သင့်ကို သူနဲ့ အတူတွဲကဖို့
သင့်ကို `လိုက်ခဲ့´ဦးဆောင်ခေါ်ယူနေသလို။ ။
(Andrew Slattery ရဲ့ Triptych)
29 – Oct – 12